श्रीकृष्ण किन प्रसन्न थिए भीम पुत्र मारिँदा ? कारण यस्ताे छ – पुरा पढ्नुहोस्……
श्रीकृष्ण किन प्रसन्न थिए भीम पुत्र मारिँदा ? कारण यस्ताे छ
महाभारत युद्धमा जब भीमका पुत्र घटोत्कच आए तब कौरव सेनाबीच खल्लीबल्ली मच्यो । कसैले पनि घटोत्कचलाई काबुमा राख्न सकिरहेका थिएनन् । तब कौरव सेनाका प्रमुखले कर्णलाई इन्द्रले दिएको दिव्य शक्ति प्रयोग गर्न भने ।
तर, कर्णले त्यो शक्तिशाली हतियार अर्जुनकलाई मार्न साँचेर राखेका थिए । किनकि, त्यो दिव्य शक्ति एक पटक मात्रै प्रयोग गर्न सकिने थियो र जुनसुकै शक्तिशाली मानव, दानव वा देवताको वध गर्न सक्षम थियो ।
घटोत्कचले सबै कौरव सेनालाई सखाप पार्न सक्छन् भन्दै सबै कौरव सेनाले कर्णलाई दिव्य शक्ति प्रयोग गर्न भने । सबैको कुरा मान्दै कर्णले घटोत्कचमाथि दिव्य शक्ति प्रहार गरे र मारिदिए । जब भीम पुत्र घटोत्कच मारिए, सबै पाण्डव दुःखी थिए, तर त्यस समय श्रीकृष्ण प्रसन्न देखिइरहेका थिए । यो देखेर अर्जुनलाई अचम्म लाग्यो ।
अर्जुनले ‘भीम पुत्र मारिएपछि पाण्डव सेना डराइरहेका छन् तर तपाई किन प्रसन्न ?’ कृष्णलाई प्रश्न गरे ।
यस प्रश्नको जवाफमा श्रीकृष्णले भने, ‘अहिले कर्णले घटोत्कचलाई मारेको देखिइरहेको छ, तर वास्तविकता यो हो घटोत्कचले चाहि कर्णलाई मारेका छन् ।’ यस कारण कृष्ण प्रसन्न देखिएका थिए । इन्द्रले कर्णसँग कुंडल र कवच पहिले नै लिएका थिए र कर्णसँग रहेको एउटै दिव्य शक्ति पनि घटोत्कचलाई मार्न प्रयोग भइसकेको छ ।
कर्णसँग भएको यो शक्तिबाट कौरवले युद्ध जित्न सक्थे, किनकि यस शक्तिलाई जित्ने शक्ति अर्जुनसँग पनि थिएन र कर्णले अर्जुनलाई मार्न साँचेर राखेका थिए । त्यसैले श्रीकृष्णले रणनीतिको माध्यमबाट घटोत्कचलाई युद्धमा लिएर आएका थिए ।
– नेपाली हेडलाइन्स
Prevलालीगुराँस स्वास्थ्यका लागि लाभदायक …
Nextयी हुन अमेरिकन नागरिक ‘मालिया डर्वोवानो’ जो नेपाललाई विश्वमा चिनाउन कम्मर कसेर लागेकीछिन
हाईड्रो पावर चल्नु पर्ने देशमा म्यानपावर चल्यो, मारामार चल्यो: ’कि मर्न देउ कि न्याय देउ’ गंगामायाको संदेश (हेर्नुहोस भिडियो)
युट्यु’बमा विराज र निकिताको अभिनय रहेको ‘साङ्लो’को गीत, बन्यो भाइरल-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
‘डान्स प्लस ४’ का एक मात्र नेपाली युवा डान्सर सुजन जसले नेपाललाई विश्व माझ चिनाए, यसरी खुशी साट्दै नेपालमा–हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
नेपाली बेहुली भारतीय बे’हुला बिच १५ मिनेटमा भयो बिहे